Saint Paul - Gpedia, Your Encyclopedia
Magac loogu yeero: "the Capital City", "the Saintly City", "Pig's Eye", "STP", "Last City of the East"
Halkudhig: The most livable city in America.1
Lua error in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/USA Minnesota" does not exist.Location in Minnesota, United States & North America
Joogga 795 ft (214 m)
Tirada dadka (2010)
• Estimate (2018) 309,180
• Tiro Badnaan 5,948/sq mi (2,297/km2)
• Magaalo 3,524,583 (US: 16th)
Saint Paul (oo loo soo gaabiyo St. Paul) waa caasimadda iyo magaalada labaad ee ugu badan ee gobolka Minnesota. Laga soo bilaabo 2017, qiyaasta magaalada ayaa lagu qiyaasey 309,180.  Saint Paul waa rugta gobolka ee Ramsey County, gobolka ugu yar iyo kuwa ugu caansan Minnesota. Magaaladu waxay inta badan ku taal barta wabiga ee Mississippi ee degaanka ku hareeraysan ee isku xirta Wabiga Minnesota, waxayna ku dhejisaa Minneapolis, waa magaalada ugu weyn ee gobolka. Labada tiir ee "Minneapolis-Saint Paul", oo ah magaalada 16-aad ee ugu weyn caasimadda Mareykanka, oo leh qiyaastii 3.6 milyan oo qof.
Waxaa la aasaasay meel u dhow degsiimooyinka Taageerada Maraykanka ah oo ah xarun ganacsi iyo gaadiid, magaaladu waxay u kicitimay magaalo markii loo magacaabay caasimadda Minnesota Territory 1849. Magaca Dakota ee Saint Paul waa "Imnizaska". Inkasta oo Minneapolis (Bdeota) si heer qaran loo yaqaano, Saint Paul waxa ku jira dawladda gobolka iyo hay'adaha kale ee muhiimka ah. Gobolka, magaalada waxaa loo yaqaan Xarunta tamarta Xcel, guriga Minnesota Wild,  iyo Matxafka Sayniska ee Minnesota.   Markay tahay xarun ganacsi ee Upper Midwest, waa xarunta ugu weyn ee shirkadaha sida Ecolab.  Saint Paul, oo ay weheliso Twin City, Minneapolis, ayaa lagu yaqaanaa heerka aqoonteeda sare. Waxay ahayd magaalada keliya ee Maraykanka oo leh dad ka kooban 250,000 ama in ka badan si loo arko kororka wareegga wargaysyada Axadda ee 2007. 
Heshiiska ayaa markii hore bilaabmay Lambert's Landing, laakiin waxaa loo yaqaan Pig's Eye ka dib markii Pierre "Pig's Eye" Parrant uu sameeyay hareeraha caanka ah. Markii Lucien Galtier, wadaad kaniisadda ugu horeysay ee gobolka ah, uu aasaasay Log Chapel Saint Paul (wax yar ka dibna wuxuu noqonayaa meesha ugu horeysa ee Cathedral of Saint Paul), wuxuu ogaaday in heshiisku hadda la yiraahdo in lagu magacaabo magacaas , sida "Saint Paul sida loo dalbado magaalo ama magaalo ayaa si fiican loo qoondeeyey, monosyllable waa mid gaaban, oo dhawaaqa wanaagsan, waxaa lagu Saynt Bowl, Saint Paul waa magaalo madaxda gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka.
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named FactFinder
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Paul&oldid=179183"
Infobox US maintenance